Alatsinainy 28B (Lk 11,29-32) 15/10/2018 | FKMP
Alatsinainy 28B (Lk 11,29-32) 15/10/2018
« Ary nitangorona betsaka ny vahoaka, dia nilazany hoe: Taranaka ratsy ity taranaka izy; mitady famantarana izy, nefa tsy homena afa-tsy ny famantaran’i Jonasa mpaminany. Fa tahaka ny naha-famantarana an’i Jonasa tamin’ny olona tany Niniva no haha-famantarana ny Zanak’olona koa amin’ity taranaka ity. Hiara-mitsangana amin’ny olona amin’ity taranaka ity ny mpanjakavavy avy any atsimo amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria niala avy tany amin’ny fara vazan-tany izy hihaino ny fahendren’i Salomona, nefa indro misy mihoatra noho Salomona eto. Hiara-mitsangana amin’ity taranaka ity ny olona tany Niniva amin’ny andro fitsarana ka hanameloka azy, satria nibebaka tamin’ny toritenin’i Jonasa izy ireny, nefa indro misy mihoatra noho Jonasa eto. »
Tompo ô, hatanjao sy halehibiazo ny finoanay afahanay hitoky tanteraka Aminao, Andriamanitray. Ataovy fantatray ny famantarana lehibe indrindra dia ny famantarana ny hazofijaliana, Ianao nitsangan-ko velona nanavotra anay tamin’ny fahotana.
Ampio izahay hibebaka sy hiala amin’ny fahazaran-dratsinay. Ovao ny fonay ka ho hita taratra amin’ny fiainanay sy ny asanay anie ny finoana, ny fanantenana sy ny fitiavana Anao.
Previous Post: Le cardinal Désiré TSARAHAZANA et le père Pedro OPEKA sont venus apporter et partager la Bonne Nouvelle
Next Post: Talata 28B (Lk 11,37-41) 16/10/2018